Antrôpôzôfia - Wikipedia
Ny antrôpôzofia dia firehana ezôterika noforonin'ilay ôkoltista aotrisiana atao hoe Rudolf Steiner tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-20. Izany firehana izany dia mifamatotra amin'ny teôzôfian'i Helena Blavatsky sy amin'ireo firehan'ny rôzikrosianisma ankehitriny. Ahitana singa avy amin'ny bodisma sy amin'ny hindoisma ary ny kristianisma ny ao. Ny fiheveran'ny antôpôzôfia dia nandray ny fiheverany ny karmà sy ny fahatongavana ho nofo indray avy amin'ny hindoisma sy ny bodisma. Ahindrahindrany ny fahafahan'ny olona ankehitriny miditra indray ao amin'ny tontolo ara-panahy amin'ny alalan'ny fampiasana sy fanazaran-tena soritsoritan'i Rudolf Steiner ao amin'ny boky nosoratany atao hoe L'Initiation. Amin'ny maha fihetsiketsehana sy fikambanana ezôterika sy ara-pivavahana azy dia ampianatiny ny fisian'ny tontolo ara-panahy izay fototry ny tontolo materialy (tontolo azo tsapain-tanana) sady manana fomba fanaova fisaintsainana lalina (meditation) sy fombafomba sampihafa.
Ny antrôpôzofia sy ireo finoany pseodô-siantifika dia maharitra mandraka ankehitriny amin'ny alalan'ireo taranja nalaina avy aminy izay hita amin'ny sehatra maro: fanabeazana (pedagôjia Steiner-Waldorf), haikanto (hosodoko, tantara an-tsehatra, sary sokitra, mozika, sns), fahasalamana (fitsaboana antrôpôzôfika, fanamboaram-panafody, kôsmetika), fanampiana ny olona manam-pahasembanana (fihetsiketsehana Camphill), toekarena (banky), pôlitika (fizaran'ny fiarahamonina ho telo), fambolena (biôdinamika sy fambolena voaloboka biodinamika), fivavahana (fianakaviambe kristiana). Maro ireo orinasa sy fikambanana izay manam-pifandraisana amin'ny fihetsiketsehana antrôpôzôfika, toy ny orinasa mpanao fanafody Weleda, ny fikambanana mpanamarina Demeter, ary ireo banky sahala amin'ny La Nef, GLS Bank, Triodos Bank, Freie Gemeinschaftsbank. Voatsikera ny antrôpôzôfia noho ny fatahorana azy sao manao ny fomba ratsin'ny sekta izay mety haterany.
I Steiner, izay manohitra mafy an'i Kant momba ny materialisma ao amin'ny siansa, dia miaro ny fiheverany fa ny "siansan'ny fanahy" dia siansan'ny tsy azo tsapain-tanana. Rehefa tafiditra tao amin'ny teôzôfian'i Blavatsky izy dia nitombo ny zavatra tafiditra tao amin'ny fiheverany avy amin'ny fanao ôkoltista: indrindra ny mistika alemàna sy ny gnôzy kristiana ary ny akon'ny filôzôfia tatsinanana, izay misy fiantraikany lehibe ao amin'ny fihetsiketsehana teôzôfika, ary koa ireo fanao araka ny ôkoltisma, ny fanandroana, ny fivavahana, ny fedrà ary ny filôzôfia momba ny olombelona.
Ankehitriny, ny tranom-pikambanana lehibe dia ny Goetheanum izay miorina ao Soisa, izay ivontoerana iraisam-pirenena an'ny Fikambanana antrôpôzôfika maneran-tany (Société anthroposophique universelle) sy ny Sekoly afaka momba ny siasan'ny fanahy (École libre de science de l'esprit) izay ahitana departemanta iraika ambin'ny folo.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Antrôpôzôfia&oldid=997088"
Voaova farany tamin'ny 17 Septambra 2020 amin'ny 10:02 ity pejy ity.